China Curved eriri ebu ebu factory na-emepụta | Yuantuo
Curved belt ebu bụ ụdị erute akụrụngwa na nnukwu erute ikike, ala ọrụ na-eri na mbara ngwa nso. Dịka usoro nkwado ya, e nwere ụdị abụọ: ụdị edozi na ụdị mkpanaka; dị ka ihe ndị na-ebugharị, e nwere eriri, eriri plastik na eriri ígwè. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-ebugharị nke onye na-ebugharị ihe na - adịkarị n'etiti - 10 ℃ na + 40 ℃, na ihe ọkụkụ agaghị agabiga 70 ℃; eriri roba na-eguzogide okpomọkụ nwere ike ibufe ihe ọkụ dị elu n'okpuru 120 ℃. Okwesighi iji ihe eji ebu belt mgbe ihe omuma ihe di elu. Mgbe ị na-ebufe ihe na acid na alkaline mmanụ bekee na organic solvents, roba ma ọ bụ plastic eriri na-eguzogide ọgwụ na mmanụ na acid na alkali ga-eji. E nwere ụdị eriri belt isii: 500, 650, 800, 1000, 1200 na 1400mm. Dị ka irufe ịdị elu, ụdị ihe, ike, erute ikike, erute ogologo na ihe ndị ọzọ nke eriri ebu, onye ọrụ nwere ike ikpebi okirikiri nhọrọ ukwuu nke ebu na ahọrọ eriri obosara, kwaaji n'ígwé na belt ọkpụrụkpụ site na ngụkọta oge.
A na-eji eriri ebu na metallurgy, mining, coal, port, njem, mmiri na ọkụ eletrik, ụlọ ọrụ kemịkalụ na ngalaba ndị ọzọ maka itinye, na-ebugharị, na-ebufe ma ọ bụ na-ebukọta ihe dị iche iche rụrụ arụ na njupụta nke 500 ~ 2500kg / m3 na ọnọdụ nkịtị. Onye na-ebu belt ahụ nwere uru nke ikike na-ebufe buru ibu, usoro dị mfe, mmezi dị mma, ọnụ ala na ike dị ukwuu. Onye na-ebu eriri belt nwere otu usoro njem ụgbọ njem otu ma ọ bụ nke dị iche iche iji bufee ihe. Dabere na usoro achọrọ, enwere ike ịhazi ya n'ụdị kwụ ọtọ ma ọ bụ nke nwere mmasị. Na mgbakwunye na imezu ihe a chọrọ iji kwụ ma ọ bụ nke a na-achọ, a na-ejikọkwa onye na-ebu belt na ngalaba arc convex, ngalaba arca concave na ngalaba kwụ ọtọ sizedị ngwongwo nke ihe eji ekwe ka ebuga ya na-adabere n'obosara eriri, eriri ọsọ, uzo n'akuku na echiche uche, ma dabere na ugboro nke nnukwu ihe. Ka ọ dị ugbu a, gburugburu ebe ọrụ na-arụ ọrụ nke eriri ebu ebu bụ n'ozuzu - 25 ～ + 40 ℃. Tụkwasị na nke a, ụlọ ọrụ anyị na-arụpụtakwa onye na-ebu eriri ọkụ, na-ebu eriri belt, onye na-ebu eriri, onye na-ebu agagharị, onye na-ebugharị ebugharị na ngwa ọrụ ndị ọzọ pụrụ iche.
Nke gara aga: onye na-ebu eriri
Osote: tọwa ebu
Airport ebu eriri
Ebu belt Rollers
Mini ebu eriri